EyoMsintsi 3, 2010 ngexesha 12:03 pm
Mna bug omtsha ukukhululwa entsha (0.6.3) kunye Mailpress Java. Xa sifuna ukubonisa omnye iinguqulelo lwephepha, kukho impazamo :
isilumkiso: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: Umyalezo wemposiso ongabhaliswanga IQumrhu, umgca: 4 kwi /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php kumgca 7
isilumkiso: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: PCDATA ixabiso olungasebenziyo Char 1 kukhoyo, umgca: 4 kwi /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php kumgca 7
isilumkiso: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: PCDATA ixabiso olungasebenziyo Char 3 kukhoyo, umgca: 4 kwi /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php kumgca 7
isilumkiso: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: Ukulandelelanisa ']]>’ aluvumelwanga ubhekiso kwi umxholo IQumrhu, umgca: 4 kwi /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php kumgca 7
isilumkiso: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: isiqulatho errorExtra yangaphakathi ekupheleni uxwebhu IQumrhu, umgca: 4 kwi /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php kumgca 7
Impazamo encinana: Lokutsalela hasAttributes umsebenzi ilungu() kwi non-object in /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php kumgca 50
EyoMsintsi 6, 2010 ngexesha 11:31 pm
Mna sifakelwe ngeniso ze ababa ukubona ungquzulwano, Ndiyaqonda mna ezingekhoyo into ethile.
Impixano kubangelwa yindlela Transposh alisebenzisayo nokuzibuyisela gettext (ngokongeza ezo chars yaye kamva yokubashenxisela) ngokuqhelekileyo ungquzulwano wena echaza kufuneka kwenzeke.
EyoMsintsi 13, 2010 ngexesha 7:55 pm
Ungongeza ukhetho “khubaza uhlanganiso gettext” …
EyoMsintsi 13, 2010 ngexesha 10:06 pm
Ewe, Qashela ke ndiza ulidibanise uguqulelo elilandelayo
EyoMsintsi 5, 2010 ngexesha 5:45 pm
Ndithanda oko ndiyabona uze ufunde apha, nje ubuchule nako ukuphumeza. Ukufumana ukulungele ukuba site yam ikofu yamvanje WP zakutshanje yaye oku plug-in yokuguqulelwa simele kum. xa liguqulelwa, iza kuhlaziya kwaye bazalise iphepha ngokungathi kunjalo iphepha eyodwa? Ukuba ndino 20 amaphepha kwi IsiNgesi kwaye iguqulelwe Japanese, Ngaba ndiya kukwazi ukusebenzisa iphepha azinakuguqulelwa ukwenza iphepha yokoqobo ndiwusindise njengokuba ngoku iphepha ephilileyo kwenza noun ngokupheleleyo meta?
Ndidinga website kwenziwa kwaye ndifuna ukuba kudityaniswe kulo nosebenziso, nabani avialable nivakalisa le?
EyoMsintsi 6, 2010 ngexesha 11:29 pm
Eliphepha eliguqulelweyo kwiphepha kweyona nayiphi na injongo owenziwayo, Andazi ukuba yintoni na ukuthini kanye xa noun ngokupheleleyo meta kodwa mna ngokuqinisekileyo Ndiyathemba ukuba isebenza
EyoMsintsi 9, 2010 ngexesha 11:10 mna
(Ndinesithukuthezi ngenxa IsiNgesi yam)
Kuba web yam yeenzipho i Ukuseta ulwimi Polish angagqibekanga. Xa ukutshintsha lang kwabanye, ndifika iguqulelwe kule lang Isihloko widget “inguqulelo” kunye iinketho “Seta ulwimi olungagqibekanga” kwaye “Hlela Translation”
umzekelo. kuba Deutsh > inguqulelo, Seta ulwimi olungagqibekanga
Kodwa xa i utshintsho Polish (olungagqibekanga wam lang) esi sicatshulwa kwi IsiNgesi, gudisi. 🙁
Kutheni ezingekhoyo widget wokuguqulela defalut lang ukuba Ukungagqibeki ngaphandle IsiNgesi?
EyoMsintsi 14, 2010 ngexesha 10:51 pm
Oku kuya omisiweyo kwinguqulelo ezayo (0.6.4) msinyane
EyoMsintsi 20, 2010 ngexesha 3:04 pm
Mholo, Ndinengxaki kunye nb_NO Norwegian. Umsebenzi in buddypress inqamla iguqulelwe kuphela umsebenzi wokuqala, zonke ezinye umsebenzi uhlala IsiNgesi…naziphi na izimvo?
EyoMsintsi 20, 2010 ngexesha 3:26 pm
Kwakhona ufumana iphepha kwezinye iilwimi…Ndiya kukunika ukufikelela endihlala yabucala ukuba ufuna ukukhangela ukuba kutheni?
EyoMsintsi 20, 2010 ngexesha 3:38 pm
Eneneni ke ulwimi abangenawo naziphi iifayile .mo. Ndilufumana iphepha…
EyoMsintsi 22, 2010 ngexesha 11:38 mna
Mholo, kwi enesiqhamo umkhosi uqwalaselo, yam umlawuli web kwandise memory_limit php_admin_value ukuba 128 kwaye ngoku isebenza… Ngoko ke banyanisile, ukuba ingxaki memory! Enks uncedo lwakho!
EyoMsintsi 24, 2010 ngexesha 12:53 mna
Ndiyavuya ndakwazi ukunceda
EyoMsintsi 24, 2010 ngexesha 8:54 mna
Ewe, enks kwakhona!
Ndiya kufumana ingxaki nangona, xa ndinazo iifayile buddypress ulwimi…Norwegian umzekelo, kuphela umsebenzi wokuqala liguqulelwe, nabanye ayikho…naziphi na izimvo?